Biden wuxuu beddelay amaradii fulinta ee Trump ee mamnuucayay TikTok - tani ma u noqon kartaa war wanaagsan Huawei? | Laga soo bilaabo Linux
Biden ayaa dib uga noqday amarada fulinta Trump ee mamnuucaya TikTok - tani war wanaagsan ma u noqon kartaa Huawei?
Xulka wararka oo dhan | | GNU / Linux
Dhawaan ayaa warku soo baxay in madaxweynaha Joe Biden wuxuu saxeexay amar fulineed oo burinaya mamnuucida Trump ee TikTok iyo WeChat.
Halkii amarka Trump, Joe Biden inuu farayo Xoghayaha Ganacsiga inuu baaro codsiyada xiriirka la leh kooxaha shisheeye taas oo keeni karta khatar xogta gaarka ah ama amniga qaranka Maraykanka.
Amarka fulinta ee Biden ujeedadeedu tahay in lagu soo rogo 'qaabka go'aanka ku salaysan shuruudaha' aad u qaabaysan mamnuucida suurtagalka ah. Tani waa tii ugu dambeysay ee tallaabooyin xiriir ah oo Shiinaha la xiriira oo uu qaaday Joe Biden ka hor safarkiisii ​​ugu horreeyay ee Yurub, halkaas oo dhimista xadgudubyada Beijing ay noqon doonto shayga ugu muhiimsan ee shirarka G7 iyo hoggaamiyeyaasha NATO.
Sannadkii hore, Donald Trump wuxuu sheegay in apps-ka ay leeyihiin shirkadaha Shiinaha "ay halis ku yihiin amniga qaranka, siyaasadda dibadda iyo dhaqaalaha Mareykanka."
TikTok iyo koox ka mid ah dadka isticmaala WeChat ee fadhigoodu yahay Maraykanka ayaa Trump ku dacweeyay go’aankan, maxkamaduhuna waxay xannibeen mamnuucista, cadaadis kaga yimid maamulka Trump, ByteDance waxay isku dayday inay iibiso qayb ka mid ah TikTok, laakiin maamulka Biden ayaa joojiyay iibinta bishii Febraayo.
Amarka fulinta ee la saxeexay ayaa beddelaya amarro fulineed oo taxane ahaa oo uu soo saaray madaxweyne Trump sannadkii hore kuwaas oo xannibay abka sida TikTok, WeChat, iyo Alipay dukaamada abka ee Maraykanka.
"Maamulka waxaa ka go'an inuu horumariyo Internet furan, la wada shaqayn karo, la isku halayn karo oo sugan, ilaalinta xuquuqda aadanaha onlayn iyo offline, iyo taageeridda dhaqaale dhijitaal ah oo caalami ah oo firfircoon. Caqabadda aan wajaheyno wareegtada ayaa ah in dalalka qaarkood, oo uu ku jiro Shiinaha, aysan wadaagin ballanqaadyadan ama qiyamkan, taa beddelkeedana ay ku dadaalaan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen xogta Mareykanka iyo teknoolojiyadda dhijitaalka ah si ay u soo bandhigto khataro aan la aqbali karin oo ku wajahan amniga qaranka. "ayuu yiri sarkaal sare. ee maamulka Biden
Amarka fulinta ee cusub ee Joe Biden wuxuu weydiin doonaa Waaxda Ganacsiga inay dib u eegto codsiyada la xidhiidha cadawga shisheeye oo ay qeexaan taas oo ay tahay inaad tixgeliso "khatar aan la aqbali karin," sida lagu sheegay warbixinta asalka ah ee Aqalka Cad.
Kuwaas waxaa ku jiri doona wax kala iibsiga ku lug leh codsiyada la iska leeyahay ama la kantaroolo by "dadka taageera ciidamada ama hawlaha sirdoon ee cadowga shisheeye, kuwaas oo ku lug leh hawlaha internetka xaasidnimo ah, ama ururiyaa xogta sirta ah."
Iyadoo Guddiga Maalgashiga Shisheeye ee Mareykanka, CFIUS, ay dib u eegis ku sameynayaan isku-dhafka ama maalgashiga shisheeye, amarka fulinta wuxuu tixraacayaa cabbir hore oo Trump ah oo si ballaaran u qeexaya macaamilada si loogu daro rakibidda ama wareejinta ku lug leh adeegga tignoolajiyada ee isgaarsiinta.
Maamulka Biden wuxuu sii wadaa inuu daaha ka qaado sida uu u wajahidiisa adag ee Shiinaha uu uga duwanaan doono kan Trump., fulinta siyaasadaha gardarada ah ee ay saraakiishu sheegeen in ay aad ula socdaan qiyamka Maraykanka.
James Lewis, oo ah ku xigeenka madaxa sare ee xarunta istaraatiijiyada iyo daraasaadka caalamiga ah, ayaa sheegay in maamulka Biden aan la tusin in uu dabciyo mowqifka adag ee dowladda ee Shiinaha. Laakiin wareegtada cusub ayaa dejinaysa shuruudo aad u sax ah oo lagu qiimeeyo khatarta ay keeni karto TikTok iyo shirkadaha kale ee ay leeyihiin cadawga shisheeye sida Shiinaha.
Awaamiirta fulinta ee hore ee Trump ayaa ugu horayn ujeedadoodu ahayd mamnuucid App-ka caanka ah ee wadaaga fiidyaha ee TikTok iyo abka fariimaha ee WeChat ee gudaha Maraykanka. Mamnuucyadan waxaa si ku meel gaar ah u xannibay maxkamadaha sababtoo ah welwelka amniga qaranka ee uu soo jeediyay maamulka Trump ay ahaayeen aad u badan mala-awaal ah ama aan caddayn.
Maamulka Biden-na waxa uu eegayaa in uu horumariyo hannaan ka wanagsan aqoonsiga iyo diiwaan gelinta walaacyada amniga qaranka si mamnuucista xog wareejinta ee iman karta ay u adkeysato caqabadaha sharciga ah.
Amarka cusub ayaa ah talaabadii ugu dambeysay ee maamulka Biden uu wax kaga qabanayo caqabadaha Shiinaha. Toddobaadkii hore, Joe Biden waxa uu saxeexay amar kale oo fulineed oo lagu ballaarinayo xayiraaddii xilligii Trump ee maalgashiga Maraykanka ee shirkadaha Shiinaha ee lagu eedeeyay inay xidhiidh la leeyihiin milatariga Shiinaha. Wareegtadan ayaa waxaa ku qoran 59 shirkadood oo laga mamnuucay inay maalgashadaan, oo ay ku jiraan kuwa abuura oo geynaya tignoolajiyada ilaalinta ee loo adeegsado Muslimiinta laga tirada badan yahay iyo mucaaradka dowladda Hong Kong.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Biden ayaa dib uga noqday amarada fulinta Trump ee mamnuucaya TikTok - tani war wanaagsan ma u noqon kartaa Huawei?
XOS-P1: Sahaminta Xiaomi Furan ee baaxadda weyn ee sii kordheysa - Qeybta 1
MX Mate: Tijaabin yar oo Linux ah - oo ku socota MX Linux